Benenitra - Wikipedia
23°27′00″S 45°05′00″E﻿ / ﻿23.450000°S 45.083330°E﻿ / -23.450000; 45.083330
Isam-ponina 8 380 mponina
I Benenitra dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan' i Benenitra, Faritanin'i Toliary. Ny isam-poniny dia 8 380 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 52101 ary ny kaodin-distrika dia 521
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia haricot. Ny isan'omby dia 7313. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 70 ny mponina no miasa tany. 28 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 2 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 11000 no isan'ny kisoa.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Misy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia kamiao. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 12 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 21 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 50000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 50000 Fmg.
2 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 55 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 4 volana. 3 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 40 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 1. Tapaka in-2 ny lalana tao anatin'ny taona 1999-2001. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 1. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina.
Kaominina ao amin' ny Distrikan' i Benenitra: Ambalavato, Ankilimary, Benenitra, Benonoky, Ehara, Ianapera
Distrika ao amin' ny Faritra Atsimo-Andrefana: Distrikan' Ampanihy, Distrikan' Ankazoabo, Distrikan' i Benenitra, Distrikan' i Betioky-Atsimo, Distrikan' i Beroroha, Distrikan' i Morombe, Distrikan' i Sakaraha, Distrikan' i Toliara I, Distrikan' i Toliara II
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Benenitra&oldid=1045054"
Dernière modification le 14 Mey 2022, à 14:58
Voaova farany tamin'ny 14 Mey 2022 amin'ny 14:58 ity pejy ity.